Mohaammad Mursiin dhaddacharratti erga du'anii sa'aatii muraasa booda awwaalaman - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Mursiin guyyaatti sa'aatii 23 'f kutaa dhunfaa keessatti hidhmaa tura (suuraa 2016 kaafame)
Erga preezidantiin Masrii duraanii Mohaammad Mursiin Wiixata darbe mana murtiitti kufani du'anii booda angaa'oonni biyyattii dhiibbaa jalatti kufaniiru.
Gaheessi ganna 67 Mursiin, erga bara 2013 aangoorraa buufamanii kaasee mana hidhaa turan.
Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amanastii Intarnaashinaal waa'ee du'a Mursiirratti ''qorannoon bilisaa fi iftoomina qabu''akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeesse. Angaa'oonni garuu balaa dhukkuba onneetiin du'e jedhan.
Masiriin Pireezidantii Filachuuf jirti
Rogeeyyiifi maatiin isaanii waa'ee fayyaa fi qophaatti hidhamanii akka isaan yaaddesse irra deddeebiin dubbachaa turan.
Awwaalchi Mursii du'anii sa'aa muraasa booda magaala Kaayirootti raawwatame. Awwaalchi isaanii bakka uummatni argametti biyya dhaloota isaaniitti akka hin raawwatamne dhorkamuu ilmi isaanii Abdullaah Mohammad Rooyitarsitti himee.
Hoogganaa olaanoo sochii Isilaamummaa amma dhorkamee, 'Muslim Brotherhood' kan turan Mursiin, bara 2012'tti hoogganaa yeroo jalqabaatiif haala dimokiraatawaan filatame turan.
Mormii ummataa waggaan booda bulchiinsa isaaniirratti taasifameen waraanaan erga aangoorraa fonqolchamani booda hidhaatti darbatamaniiru.
Sana boodas bara 2014tti dureen waraanaa Abdul fataah Al-Sisi gara aangootti dhufan.
Erga Mursiin aangoorraa buufamaniin booda anga'ootaa fi deeggartoota isaanii hunda irratti tarkaanfii fudhatameen namoonni kuma kudhaniin lakkaa'aman hidhaman.
Garee Obbolummaa Islaamummaa (Muslim Brotherhood) fi Pireezidantiin Tarkii Taayip Erdohaan kanneen du'a Mursiitiif Masrii balaaleeffatan keessatti argamu.
Mana Murtiitti maaltu ta'e?
Mursiin guyyaa Wiixataa Kaayirootti himannaa garee Hamaas kan Isilaamoota Paalistaayin waliin hiidhata qabda jedhuun irratti dhiyaateef mana murtiitti dhiyaatanii turan.
Qondaaltoonni akka jedhanitti abbootiin seeraa dhimma isaa ilaalaniitti lafa hidhamtoota biraa waliin itti hidhame keessaa karaa ofilaalleen sagalee dabarsuun daqiiqaa shaniif dubbachuuf akka gaafate himu.
Daqiiqaa muraasa booda garuu osuma dhaddachi gaggeefamaa jiru jidduutti ofi wallaalan.
Akka ibsa abbaa alangaa Masrii jedhutti "Gara hospitaalaatti geeffamuun booda lubbuun darbe.''
Aanga'oonni haala du'a isaarratti qorannoon akka gaggeefamuuf ajajamuu kan himan yoo ta'u, waanti haaraa fi miidhaan qaamaa homtu akka hin mul'atiin ibsaniiru.
TV biyyaaleessa garuu sababiin du'asaa dhukkuba onneeti jedheera.
Mursiin garuu erga himannaan sadiin itti murtaa'ee booda hidhaa keessa turaniiru. Duraan murteen du'aa kan itti murtaa'e ture yoo ta'u, garuu booda murtichi ni geeddarame.
Miirri ture maal fakkaata?
Saaraa Lii Witisan damee Jiddu gala Bahaafi Kaaba Afriikaatti daarektarri hojii raawwachiftuu dhaabbata 'Human Rights Watch' duuti isaa gaddisiisaa fi akka ta'u eegamaa kan tureedha' jechuun ergaa tiwiitaraatiin barreesitee jirti.
"Du'aatiin Pireezidantii Masrii duraanii Mursii kunis miidhaa motummaan baraa dheeraaf irraan gahaa turee fi hanqina wal'ansaa,fi dhorkaa maatiin akka hin ilaalle fi abbaa alangaatiin akka wal hinagarree taasifameetii'' jetteti Ms. Witisan .
Akkasumas garee kun haala ''saba mirgoota namoomaa Marsii keessatti dagaagaa jiru, haala qabiinsaa sukkanneessaa hidhamtootaa dabalate,'' ilaalchisee Dhabbanni Biyyoota Gamtoomanii qorannoo akka gaggeessuuf waamicha dhiyeesse.
Garichi akka jedheetti Mursiin waggoota jahan darban keessatti maatiin yeroo sadii qofa akka ilaalan kan hayyamameef, abbootii alangaa fi hakiimooti akka hin ilaallees dhorkamaa ture.
Goodayyaa suuraa Jiraattoonni Istaanbul Mursiif kadhannaa awaalchaa gaggeessaniiru
Mohaammad Mursiin Eenyu?
Mursiin mandara El-Adwah jedhamtu kutaa biyyaa Shaarqiyaa keessatti argamtutti bara 1951 dhalatan.
Bara 1970 keessa yuunivarsiitii Kaayirootti Injinariingii kan baratan yoo ta'u, boodas gara Ameerikaatti imaluun PhD xumuran.
Bara 2012 'Muslim Brotherhood' bakka bu'uun filannoo pireezidantummaa biyyattii irratti dorgomanii injifachuun gara aangoo dhufan.
Waggaa tokko aangoorra turan keessattis warri amantaa Isilaamaa leellisan qofti siyaasa biyyattii akka dhuunfatan taasisuu fi diinagdee biyyattii akka hin malle gochuun qeeqamaa turan.
Lammileen biyyatti pirezidantummaa isaanii morman miliyoonaan lakkaa'aman addababayiitti bahuun mormiin waggaa 1ffaa aangootti dhufuu isaanii kabajaniiru.
Adoolessa 3 bara 2019, humni waraanaa biyyatti heera mootummaa erga uggureen booda, pireezidant Mursii aangoo irraa buusuufi mootummaa ce'umsaa dhaabuu labse.
Gochi sun fonqolchadha jechuun kan qeeqan Mohaammad Mursiin, yeroosuma hidhaman.
Filannoo boodarra filatameen ajajaa olaanaa humna waraanaa kan turan Abdulfattaa al-Sisiin pireezidanti ta'uun muudaman.
Mohaammad Muursii: Pireezidantiin Masirii duraanii mana murtii keessatti du'an
Filannoo Masirii: Lammiileen Pireezidantii filachuufi